Ireo torohevitra tsara indrindra handehanana any New York ilaina | Vaovao momba ny dia
Vaovao momba ny dia
Fiara manofa trano
Tolotra sy fifampiraharahana
Nandehandeha niaraka tamin'ny ankizy
Inona no ho hita
Ny toro-hevitra tsara indrindra amin'ny dia mankany New York
Susana godoy | | New York
Rehefa manao dia lavitra isika dia tianay foana ny maka izay rehetra kasaina, na farafaharatsiny amin'ny ankamaroan'ny zavatra. Marina fa tsy maintsy mamela zavatra foana ho an'ny saina ary miaraka aminy isika, amin'ny improvisation. Ka, mandeha any New York Zavatra tsy manam-paharoa izy io ary misy zavatra tsy manam-petra tokony hatao sy jerena ao an-tanànan'ny trano afrikanina.
Fa ny marina dia ny hoe handeha tsara ny zava-drehetra, tsy misy toa ny filokana amin'ny andiany iray torohevitra na dingana rehefa mandeha any New York. Fomba iray hamelana ireo kofehy fototra mifamatotra tsara ary, amin'izany fomba izany, afaka tonga isika hankafy ny tanàna izay, araka ny efa nolazainay fa tsy matory mihitsy! Hiainga ve isika?
1 Sidina mora mankany New York
2 Ny visa amin'ny dianao
3 Sarobidy foana ny fiantohana ara-pahasalamana
4 Mitadiava toerana honenana mialoha foana
5 Ankafizo ny fiantsenana any New York
6 Tandremo ny angona fizahana
7 Manova vola handehanana any New York
Sidina mora mankany New York
Voalohany indrindra, tsy maintsy mifidy ny daty isika miaraka amin'izy ireo, lasa ilaina ny fikarohana ny tapakilan'ny fiaramanidina. Tsy zavatra sarotra izany, satria manana milina fikarohana marobe izay hanampy antsika amin'izany asa izany isika anio. Mitahiry kely foana afaka misafidy ny fotoan'ny lohataona sy ny fararano koa ianao. Marina fa amin'ity farany ity dia mbola hangatsiaka ihany ary afaka hiseho ny orana, fa ny hatsaran'ny tanàna kosa mitombo. Manomboka amin'ity dia tokony holazaina fa ny vidin'ny sidina mivantana, ohatra, avy any Madrid, dia somary lafo kokoa. Avy eo manana ny fahafahan'ny fijanonana iray na roa ianao. Zahao foana ny ora fijanonana voalaza fa tsy mila mandeha haingana be avy amin'ny sidina iray mankany amin'ny iray hafa ary hanome fotoana ampy antsika. Ho fanampin'izay, mba hahatonga ny dia ho fohy kokoa, asaina any London na Paris ireo fijanonana ireo fa tsy any Wina, ohatra.
Ny visa amin'ny dianao
Ny antontan-taratasy ilainao hidirana amin'ny firenena dia nantsoina 'IS'. Izy io dia antontan-taratasy izay tsy maintsy fenoy. Aza matahotra anefa fa azo atao amin'ny alàlan'ny Internet izany ary misy vidiny manodidina ny 12 euro. Izy io dia karazana visa ho an'i Etazonia.
Sarobidy foana ny fiantohana ara-pahasalamana
Satria tsy dia mieritreritra be loatra azy io isika indraindray, saingy marina fa ny mandeha mankany New York dia mendrika ny handehanantsika misaron-damosina. Amin'ity tranga ity dia miresaka isika manana fiantohana ara-pahasalamana tsara. Mihoatra noho ny zavatra rehetra satria lafo ny olan'ny fahasalamana any ary hitahiry vola be isika, raha misy ny zavatra hitranga, ary koa ny hatairana voalohany. Noho izany, ny fiantohana fiantohana mandritra ny andro dianao dia ho zavatra tena takatry ny saina ary mendrika hodinihina.
Mitadiava toerana honenana mialoha foana
Angamba mihoatra ny tapakilan'ny fiaramanidina, mety ho lafo be ny fitadiavana trano honenana. Satria tsy misy fisalasalana fa lafo ny làlana mankany New YorkNy trano fandraisam-bahiny sy ny trano fandraisam-bahiny koa dia manana vidiny lafo be. Ankoatr'izay, tsy misy ifandraisany amin'ny hotely kintana roa na telo aza fantatsika eto. Any New York ny sasany amin'izy ireo matetika dia ao anatin'ny toe-javatra mahatsiravina, na dia manana vidiny mirary kokoa aza izy ireo. Noho izany, maro ny olona mankany amin'ny hotely kintana efatra, izay mahalala farafaharatsiny fa hahita toerana misy fiononana sy madio tanteraka izy ireo. Ny sasany kosa mitady efitrano iraisana, raha vondrona tsara ianao, noho izany dia ilaina foana ny manomboka mitady haingana araka izay tratra. Ny faritra Times Square dia manana safidy tsara.
Ankafizo ny fiantsenana any New York
Satria tsy ny rehetra no ho lasa olana sy adin-tsaina amin'ny fikarohana na vola. Raha vantany vao ao an-tanàna isika dia afaka mandray ny zava-drehetra milamina kokoa. Amin'ny fomba ahoana? Eny, amin'ny alàlan'ny mividy ao amin'ny New York Outlets. Eny, iray amin'ireo safidy tsara indrindra izy io, satria ho hitanao ny lamaody sy ny kojakoja avy amin'ny orinasa lehibe miaraka amin'ny vidiny mahavariana. Noho izany, olona maro aza no tsy maintsy mividy valizy iray indray ho an'ny fiverenana. Ora iray monja avy eo an-tanàna dia afaka mihaona amin'ny iray amin'ireo lehibe indrindra ianao: 'Woodbury Common Premium Outlet'. Na dia samy ao amin'ny tanàna iray ihany na any Manhattan dia afaka mahita ilay antsoina hoe 'Century 21' ihany koa ianao.
Tandremo ny angona fizahana
Mazava fa tsy afaka miaina intsony isika raha tsy misy ny finday. Izany no antony rehefa hivezivezy any New York, azo antoka fa mieritreritra ny hampakatra sary rehetra nataonao ianao. Toy izany koa hafatra amin'ny alàlan'ny WhatsApp na antso no ho filaharan'ny andro. Saingy tsy te hanana karazana fampitahorana amin'ity lohahevitra ity izahay. Ka noho izany, tsara kokoa ny mifandray amin'ny orinasanay sy mifanakalo hevitra momba ilay raharaha, satria angamba azon'izy ireo atao ny manome tolotra mety antsika. Raha tsy izany dia afaka mahazo karatra SIM mialoha mialoha izay mifanaraka amin'ny antenaina misy isika. Ho fanampin'izay, hahita toerana misy anao foana ianao Wifi maimaim-poana ao an-tanàna, fa satria tsy vitantsika ny miandry azy io indraindray, tsy maninona ny mahafantatra ny safidy rehetra ananantsika.
Manova vola handehanana any New York
Averina indray, mila mampahafantatra ny tenantsika isika ary tsara. Satria marina izany ny banky sasany dia mandoa vola be ho an'ny fifanakalozam-bola. Ny tsara indrindra dia ny manao azy alohan'ny handaozana ny trano. Ataovy mialoha ny fotoana, satria mety haharitra andro vitsivitsy vao ho tonga ny dolara, indrindra rehefa mipetraka amin'ny faritra kely kokoa isika. Manana trano fifanakalozana ihany koa izahay any amin'ny toerana haleha ary afaka manana taha ambony kokoa ny tsirairay. Noho izany dia tsy maintsy ataontsika antoka tsara izany. Noho ireo antony rehetra ireo dia tsara kokoa hatrany ny mitondra vola efa voaomana ary indray mandeha any New York, mitady toerana hafa raha ilaina.
Te-hamandrika torolàlana ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » New York » Ny toro-hevitra tsara indrindra amin'ny dia mankany New York
Tehirizo ato amin'ity tranokala ity ny anarako, mailaka ary tranokala ho an'ny hevitra manaraka.
Te-handray tolotra sy fifampiraharahana amin'ny mailaka aho
Rahoviana no tsara kokoa ny mankany Mallorca?
Raiso amin'ny alàlan'ny mailakao ny vaovao
Midira amin'ny Actualidad Viajes maimaim-poana ary raiso ny vaovao farany momba ny fizahan-tany sy ny dia amin'ny mailakao.
4 Hotely ianareo
Ny fanofana fiara
Fihetsiketsehana amin'ny môtô
Raiso ny tolotra sy ny varotra